Mareykanka oo bilaabay u daabulida diyaaradaha drones-ka dalka Niger… – Hagaag.com
Mareykanka oo bilaabay u daabulida diyaaradaha drones-ka dalka Niger…
Posted on 31 Luulyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Taliska milatariga Mareykanka ee Africa ayaa xaqiijiyay in ay bilaabeen in wadanka Niger ay u daabulaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan drones-ka bilowgii sanadkan 2018-ka.
Niger oo dhacda galbeedka Afrika ayaa Mareykanka heshiiskan milatari la saxiixatay bishii November sanadii 2017-dii balse labada dhinac midna muusan xaqiijin heshiiska ay gaareen.
Mareykanka iyo Niger ayaa horay u lahaa wada shaqeyn dhanka sirdoonka ilaalinta iyo sahminta,iyadoo ciidamo Mareykan ah ay dalkaasi joogeen sida ay sheegtay afhayeenka ciidamada Mareykanka ee Afrika Samantha Reho.
Wada shaqeynta Mareykanka iyo Niger ayaa ujeedada laga leeyahay waxay tahay sidii looga jawaabi lahaa khatarta dhanka amniga ee gobolka,iyadoo diyaaradaha Drones-ka ay bilaabeen in ay howlahooda amni sanadan aynu ku guda jirno ee 2018-ka.
Ms Reho ayaa intaa raacisay in diyaaradahan wax duqeeya saldhigooda uu yahay garoonka 101-aad ee ciidamada cirka ee ku yaal caasimada Niami ee dalka Niger inkastoo wali daabulaada diyaarado kale ay dhiman yihiin.
Labada dal ayaa mudo dheer waxay lahaayeen wada shaqeyn dhanka amniga iyo iskaashi ka dhan ah kooxaha Argagixisada.
Sanadii 2013-dii ayey aheyd markii dowlada Niger ay ruqsad u siisay Mareykanka in diyaaradihiisa wax duqeeya ee drones-ka ay isticmaali karaan garoomada Niger,waxaana waqtigaas jiray kororka kooxaha Al-qaacida ee waqooyiga Mali iyo dalalka kale ee saxaraha Afrika ku yaal.